Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-Autodesk ityhila "Igumbi elikhulu" leeNgcali zoKwakha
Izisombululo ze-Autodesk Construction zisandula ukubhengeza ukumiliselwa kweGumbi eliKhulu, indawo eku-intanethi evumela iingcali zokwakha ukuba zinxibelelane nabanye abakweli shishini kwaye banxibelelane ngqo neqela le-Autodesk Construction Cloud. Igumbi Elikhulu liziko elikwi-intanethi elinikezelwe ngokucacileyo kwiingcali zokwakha ukwandisa uthungelwano kunye nolwazi kunye nabanye kwishishini lokwakha.
Igumbi elikhulu livulelekile kubo bonke abathengi be-Autodesk, nokuba batsha kwipotfoliyo yeLuhlu lweLuhlu lwe-Autodesk okanye abanamava Hlanganani, i-BIM 360, i-BuildingConnected okanye i-PlanGrid.
Ngokujoyina i-Big Room online yoluntu, amalungu anga:
Khulisa inethiwekhi yakho kunye neengcali zokwakha ezivela kwihlabathi liphela: Ngaphezulu kwesithathu samathuba amatsha avele kwincoko nje eqhelekileyo, Igumbi Elikhulu lizisa ukujongana ubuso ngobuso kwindawo yokusebenzela nakwiofisi kwiqonga elitsha.
Buza imibuzo kwaye ufunde ngakumbi malunga nomzi mveliso: Uluntu oluku-intanethi lwe-Autodesk lunceda iingcali ukuba zikhulise iihorizons zazo, zifumane ukuqonda kwezinye iingcali kwicandelo labo, kwaye zibonelele ngamalungu ngokufikelela kumanqaku okwakha akutshanje ukuze aqhubeke noluhlaziyo kunye nophuhliso kumzi mveliso.
Bopha amandla apheleleyo e-Autodesk Construction Cloud: Ngokuqonda ngokucacileyo ukuba abanye bayisebenzisa njani i-Autodesk Construction Cloud, amalungu anokufumana iingcebiso kunye namacebo kwiingcali zemveliso ukuze bafumane uninzi kwizisombululo zabo kwaye babe ngabokuqala ukwazi malunga nohlaziyo kunye neempawu ezintsha.
Funda kwaye unxibelelane nabanye nanini na, naphi na: Nokuba usekhaya, eofisini, okanye ebaleni, amalungu angathatha inxaxheba kwiingxoxo, afunde amanqaku, okanye agqibe uphando nangaliphi na ixesha, ngokusebenzisa nayiphi na idesktop kunye neselfowuni.
Qinisekisa uluntu: Igumbi elikhulu likwabonelela ngemiceli mngeni evumela amalungu oluntu ukuba akhuphisane noontanga babo, aqokelele amanqaku, kwaye bafumane imbuyekezo efana nokuphanga, amava angalibalekiyo, kunye neminye imivuzo enomdla.
Igumbi elikhulu libaluleke kakhulu kolu hlengahlengiso lweshishini lwe-4, ngoku imfuneko yokunxibelelana phakathi kwamaqela omsebenzi asasazeke kwiindawo ezahlukeneyo yinto yokwenene. Akusekho mfuneko yokuba iqela leprojekthi lisekwe endaweni enye, le meko yokusebenzisana ivumela ukuhamba komsebenzi apho iprojekthi inokukhuliswa khona ngokugqibeleleyo okupheleleyo ngokudibeneyo neLuhambo lwe-Autodesk.
Iqonga lamagumbi amakhulu linokusetyenziselwa isikhangeli, kwiPC okanye kwiselfowuni. Kuyenzeka ukuba unxibelelwano olutsha nezinye iingcali zokwakha kwihlabathi liphela, kwaye ucele uncedo okanye uqikelelo lweprojekthi. Elinye inyathelo lokuvela kwe-Geoengineering.
Udliwano-ndlebe noCarlos Quintanilla-QGIS
Ikhosi yasimahla yeAutoCAD-ekwi-intanethi
Into eyenzeka kweli bali: Yintoni Entsha AutoCAD 2013 ngokubhekiselele kwezinye iinguqulelo